Ukuphupha itrone Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Itrone sisihlalo somlawuli. Ngokwesiqhelo yenziwe ngezinto zexabiso kwaye ihonjiswe ngokutyebileyo. Luphawu lodumo, amandla negunya. KwiGrisi yamandulo, itrone yayithathwa njengesihlalo sookumkani kunye noothixo.
Ibhayibhile ikwathetha ngetrone kaThixo, kunye netrone kaSolomon njengommeli wayo. Ngokwenkcazo yakhe, izihlalo zabalawuli abaninzi zaziyilwe ngobunono de kwaba yinkulungwane yama-XNUMX. Ukubekwa etroneni yinto eyimfuneko ebalulekileyo yokuqinisekisa. Izihlalo zabalawuli abadumileyo sisihlalo sobukhosi sikaCharlemagne sika-Aachen, isihlalo sobukhosi senamba yaseTshayina, okanye itrone yejaguar yeenkosana zaseMaya.
Iphupha elikwitrone mhlawumbi linomdla kakhulu. Inokwenziwa ngezinto ezintle kakhulu kwaye isebenze ngobugcisa. Mhlawumbi ukuphupha kunandipha ubuqaqawuli, kodwa ungasifumana isihlalo esoyikisa. Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukuba umntu ophuphayo ngokwakhe uhleli etroneni okanye komnye umntu, ekufuneka ejonge kuye.
1 Uphawu lwephupha «itrone» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itrone» - ukutolika kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «itrone» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itrone» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwinkcazo yamaphupha, uphawu lwephupha "itrone", kwelinye icala, luphawu lwe Jonga kwi nembeko, kunye nokuzithemba okubonisiweyo kwabo baphuphayo.
Kwelinye icala, unokubonisa ukuba ungathanda ukwamkelwa ngakumbi kubomi bakho bokwenyani. Kufuneka alumke angahlukanisi abo basondeleyo kuye ekukhangeleni kwakhe. Ngokukodwa abantu abalumke ngakumbi kubomi bokwenyani banokoyisa ngesiquphe AmabhongoUkugcina amandla, ngamanye amaxesha kuyadlulwa.
Ngokukodwa xa uzibona uhleli etroneni ephupheni, oku kubonisa ukuba uyakholelwa ukuba unelungelo lokwamkelwa igunya lakho. Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha lubandakanya isimo sengqondo esinekratshi kunye nokuzithanda.
Ukuba umphuphi kufuneka ehle esihlalweni sobukhosi kwakhona ephupheni okanye ukuba akaphakami konke konke, ithemba eliphoxekileyo libonakaliswa kwisimboli yephupha. Inxulumene noku, kusenokubakho neenkxalabo.
Ukuma phambi kwetrone, oku kubonisa ekuchazeni iphupha ukuba ingxoxo kunye nomphezulu ilindile. Kusenokwenzeka ukuba ukuphupha kuneenjongo zako incamathele phezulu kakhulu kwaye ngoku ufumana ukwaliwa. Ukuba ubona omnye umntu ephupheni kusihlalo womlawuli, kunokwenzeka ukuba sele enikezele amabango akhe kumandla nakwimpembelelo.
Iliva elingasetyenziswanga limi ekutolikeni kwamaphupha ngokwazi ukuba uphuphe ubeka Lindele Andikwazi ukuthobela. Uphawu lwephupha lubonisa iimfuno zakho ezigqithileyo.
Uphawu lwephupha «itrone» - ukutolika kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwasemaphupheni, uphawu lwephupha "itrone" ibonisa imeko yangaphakathi yephupha njengebheji yegunya kunye nebango lolawulo.
Isihlalo sasebukhosini sikwangumqondiso wesikhundla esithathwa ngumphuphi okanye angathanda ukusithatha eluntwini okanye kwindawo yakhe yabucala. Ephupheni, amabhongo kunye neenzame zichaziwe ezingabonwa ngabom kubomi bokwenyani. Oku kunokubangelwa ngumnqweno wokuzikhethela.
Kuhlalutyo lwamaphupha, nangona kunjalo, "itrone" yomfanekiso ikwangumboniso oqhelekileyo ukuzukiswa yomntu wakho. I-subconscious ihambelana nephupha kunye nokuzonwabisa okucinezelweyo ngamandla, okunokuthi kukhokelele ekuphathweni gadalala kwamandla akho. Ukongeza, ephupheni phambi kwetrone, unokuziva ulixhoba lomntu onamandla okanye umzekelo. Uphawu lwephupha emva koko lubonisa iimvakalelo ze Ukujongela phantsi Ndagqitha.
Uphawu lwephupha «itrone» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo egqithileyo, uphawu lwephupha "itrone" luphawu lokuchazwa kwamaphupha. igunya lokomoya. Esi sikhokelo kunye neenkxaso zokuphupha kuphuhliso lwakho lokomoya.